Warar - Kee baa fiican, tanleyda cad ama tan lafta cusub, aan soo bandhigo?
Weelasha miisaska loo yaqaan 'Porcelain table' waa miisaska ugu caansan ee miisaska miiska maalin kasta. Marka la eego alaabta ceeriin, weelka loo yaqaan 'porcelain table' wuxuu u qaybsan yahay weel cad oo jiingado ah, weelka lafaha lafaha, iyo miisaska miraha lagu sameeyo. Kuwaas waxaa ka mid ah, miiska miisaska lafaha shiinaha ayaa aad caan u ah.
Shiinaha lafta waxaa markii hore loogu yeeri jiray lafta shiinaha, laakiin dadku waxay dareemeen in erayga "ash" uusan ahayn "xarrago", sidaa darteed ayay magaceeda ugu beddeleen lafta shiinaha, ama lafta shiina markay soo gaaraan. Lafta shiinaha waxay ka koobantahay in kabadan 40% dambaska geedaha dhirta waana wax soosaarka macaamiisha cagaaran ee bey'ada u fiican. Marka la barbardhigo dhoobada caadiga ah, habka toogashada ee gaarka ah iyo waxa ku jira kaarboonka lafaha waxay ka dhigayaan shiinaha lafaha inay u muuqdaan kuwo cad, jilicsan, hufan, iyo miisaan fudud. Markaad iibsanaysid miiska sheyga lafaha, waxaad ku kala saari kartaa saddexda qaab ee soo socda.
Mid, rajo. Midabka shiinaha lafaha: lafta shiinaha lafteedu waa cadaan kareem dabiici ah oo u sabab ah budada lafaha, taas oo waxoogaa hurdi ah ku ah ereyada caanka ah. Muuqaalkan laguma dayan karo shey kale oo faaluuq ah.
Noocyada ugu muhiimsan ee galaasyada hadda suuqa ku jira, sida tanleyda cad, tanleyda qolofta, iyo tan pearl-ka ayaa dhammaantood cad cad. Waxaan ku sharixi karnaa midka cad inuu yahay buluug-cadaan; marka labaad, dhammaantood waa china lafo, laakiin laga bilaabo Darajada huruuddu waxay sheegi kartaa waxyaabaha budada lafta ee lafta shiinaha laftiisa. Shiina lafaha, waxa ku jira budada lafaha ayaa ah tusmo farsamo oo muhiim ah si loo kala saaro darajada shiinaha lafaha. Inbadan oo budada lafaha ah, ayaa aad u sarreysa shiina lafaha, iyo midabka shiinaha laftiisa waxay u egtahay inuu yahay caano cad. Taas bedelkeeda, haddii cuntada lafaha ay yar tahay, huruudda shiinaha laftiisa laftiisa waa mid aad u muuqata.
Ta labaad, ur. Dhawaaqa shiinaha lafaha: Soosaariddiisa darteed, waxaa jira muuqaal muhiim ah oo dibadda ah ee shiinaha lafaha, taas oo ah dhawaaqa la sameeyo marka lafta shiinaha ay isku dhacdo-dhigto laba fijaan oo sare oo heer sare ah oo shiinaha ah gacmahaaga fidsan si aad isugu dhacdo, fiiro gaar ah u yeelo, Lafta shiinaha waa balaastikada lagu shido heerkul sare. Adaggu aad buu u sarreeyaa. Shilka noocan ah ma dhaawici doono. Waad isku dhici kartaa wax yar oo adag. Shiinaha laftiisa heerka sare ah ayaa soo saari doona sida gambaleelka shilalka shilka kadib. Dhawaaqa "clang" waa la dhawaaqayaa, oo waqtiga dhawaaqa waa la dheereeyaa, halka porcelainska kale ay sameeyaan dhawaq "ding" ah, oo asal ahaan ma jiro dhawaq.